Budata PUBG Pixel APK maka Android
Budata PUBG Pixel
Free Budata maka Android (42.00 MB)
Budata PUBG Pixel,
Egwuregwu Pixelated Battle Royale ka onye ọ bụla nwee ọ enjoyụ. Ọ bụrụla ihe na-atọ ụtọ na ọtụtụ ndị egwuregwu na egwuregwu nkeji 3-5. Enweghị nchere nime ọnụ ụlọ, enweghị menu mgbagwoju anya ịnyagharịa. Naanị gwuo egwu, skydive, kwakọrọ ihe ma gbalịsie ike maka nlanarị.
Soro na otu onye ọkpụkpọ na-alụ ọgụ royale ozugbo megide ndị egwuregwu si nakụkụ ụwa niile. Jikwaa ọdịda parashute gị nebe ị họọrọ ka inyocha nnukwu maapụ egwuregwu ahụ. Mgbe ahụ chịkọta ọtụtụ ihe gburugburu wee gbakọta megide ndị iro gị. Leleekwa airdrops ka ị nweta uru dị oke mkpa na egwuregwu.
Ngwá agha na akụrụngwa nwere oke pụtara ịlụ ọgụ maka ịchịkwa akụrụngwa ndị a. Ndị egwuregwu na-agbakwa ọsọ megide oge; nihi na agbọ agha na-adị ntakịrị na-adị ntakịrị!
PUBG Pixel Ụdịdị
Nha faịlụ: 42.00 MB
Egwuregwu Sinma, otu nime ndị mmepe egwuregwu na -aga nke ọma nke ikpo okwu mkpanaka, na -akwado...
Mkpụrụ Master na-enye egwuregwu dịka Fruit Ninja, nke kachasị ebudatara ma kpọọ egwuregwu ịkụ...
Na -akwado agbụrụ dị iche iche na egwu netiti ọzara, Stunt Car Challenge 3 na -aga nihu na -enye...
Onye edemede Simulator 2, ebe ị ga -agbasi mbọ ike ka ị bụrụ onye edemede ama ama site na ịhazi ọrụ...
Real Cruise Ship Driving Simulator 2019, ebe ị nwere ike jiri ụgbọ mmiri dị iche iche gaa njem noké...
iGun Pro APK bụ otu nime egwuregwu egbe kachasị ewu ewu na mkpanaka. Site na nbudata ihe karịrị nde...
Fun Run 3: Arena bụ egwuregwu egwuregwu a na-enye ndị na-egwu egwuregwu nelu ikpo okwu nefu,...
Jikere ịlụ ọgụ na mbara igwe. Space Shooter, nke ga-eduga anyị na omimi nke ohere na ọdịnaya ya...
Galaxy War bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke ukwuu nke na-echetara Raptor: Oku nke Shadows, egwuregwu DOS...
Bonetale APK bụ onye na-akwado ya mere ọrụ dabere na egwuregwu rpg Undertale ebe ị na-agaghị ebibi...
Obi ụtọ agba bụ egwuregwu agba nke ị nwere ike igwu na ngwaọrụ mkpanaka gị na sistemụ arụmọrụ gam...
Egwuregwu Pixelated Battle Royale ka onye ọ bụla nwee ọ enjoyụ. Ọ bụrụla ihe na-atọ ụtọ na ọtụtụ...
Ị na-ejikwa ndị na-agba ụta sitere na stickman na The Archers 2 APK gam akporo egwuregwu. Ọ bụrụ...
Ball Blast APK bụ egwuregwu gam akporo gam akporo ebe ị na-eji egbe egbe kụrie nkume. Egwuregwu...
Egwuregwu Shark APK Ihe egwuregwu gam akporo Ubisoft mepụtara nụdị omume ịlanarị. Ị na-achịkwa...
Fubo Runner so na egwuregwu ekwentị Fenerbahce. Fubo Rolls na-amasị ndị na-enwe mmasị igwu...
Hoop Stars bụ nnukwu egwuregwu nka mkpanaka ị nwere ike igwu nelu ikpo okwu gam akporo. Hoop Stars,...
Hyper Jobs na-adọta uche dị ka egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ngwaọrụ mkpanaka gị na...